Gleam: Ngwa Azụmahịa E Habere Iji Tuo Azụmahịa Gị | Martech Zone
Wednesday, February 9, 2022 Wednesday, February 9, 2022 Douglas Karr
Otu enyi m kwuru na ya kwenyere na ịre ahịa bụ ọrụ ị na-eme ka ndị na-achọghị ịzụrụ ihe zụta ya. Ouch… Anaghị m nkwanye ùgwù. Ekwenyere m na ịzụ ahịa bụ nka na sayensị nke ịkwanye na ịdọrọ ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa site na okirikiri ịzụrụ. Mgbe ụfọdụ ịre ahịa na-achọ ọdịnaya dị ịtụnanya, mgbe ụfọdụ ọ bụ ihe a na-apụghị ikweta ekweta… na mgbe ụfọdụ ọ bụ obere ihe na-akpali akpali.
Gleam: Ike karịrị ndị ahịa 45,000
Gleam na-enye ngwa ahịa anọ dị iche iche na-enye nudge ahụ. Ha bụ ọnụ ụzọ maka ịrata onye ọbịa ka ọ na-emekọrịta ihe na akara gị - ma nke ahụ na-ekerịta ya site n'okwu ọnụ, ịdebanye aha na listi email, na-ekerịta foto ọha, ma ọ bụ nweta ụgwọ ọrụ. Ngwa ahịa ahịa Gleam jikọtara nke ọma na ecommerce gị, nyiwe ịre ahịa, na ọwa ọha iji rụọ ọrụ ahụ… na enwere ike ịgbapụ na otu dashboard:
Gbaa Asọmpi - Wulite asọmpi siri ike na sweepstakes maka azụmahịa gị ma ọ bụ ndị ahịa gị. Ngwakọta omume anyị buru ibu, njikọta na njirimara wijetị na-enyere gị aka ịmepụta mkpọsa dị iche iche.
Ụgwọ ọrụ mgbapụta ozugbo - Ngwa ngwa rụpụta ụgwọ ọrụ mgbapụta ozugbo maka omume sitere n'aka ndị ọrụ gị. Zuru oke maka kupọns, igodo egwuregwu, nkwalite ọdịnaya, egwu ma ọ bụ nbudata.
Ụlọ ihe ngosi nka - Bubata, chepụta ma gosipụta ọdịnaya sitere na netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ jiri ngwa osisi anyị mara mma mee asọmpi foto na-etinye aka.
Ijide email - Ụzọ kacha mma iji wuo ndepụta email gị. Gosi onye kwesịrị ekwesị ụdị ozi ezubere iche ma ọ bụ nwepu aha n'oge kwesịrị ekwesị wee mekọrịta ha ozugbo na ndị na-eweta email gị.
Mmekọrịta gụnyere ihe karịrị 100 nyiwe, gụnyere Amazon, Twitter, Klaviyo, YouTube, Bit.ly, Facebook, Kickstarter, Shopify, Instagram, Salesforce, Product Hunt, Twitch, Spotify na ndị ọzọ…
Debanye aha maka Gleam ma wuo ngwa mbụ gị
Nkpughe: Ana m eji njikọ mmekọ n'ime akụkọ a maka Gleam na nyiwe ndị ọzọ.
Tags: ngwa asọmpingwa ijide emailpopup njide emailọpụpụ ebumnucheire ụtọchukwuam.iongwa ahiaụgwọ ọrụ ngwangwa gallery ọha
Kedu ka Ecommerce CRM si enweta uru B2B na B2C azụmahịa